Cali Mahdi Ku Ogolaaday in Sunta Halista ah Lagu Duugo Soomaaliya. – The official Somali Historical
“Qiimaha Qofka Bini’aadamka ah waxa uu la mid yahay eber, waxa keliya ee ay qiimeeyaan waa lacag iyo weliba lacag siyaado ah, ma jiro wax ay kala jecel yihiin” Sidaas waxaa yiri nin lagu magaacaabo Giampiero Sebri oo ahaa kuwii Sunta Halista ah keeni-jirey Soomaaliya… Waxana uu intaas ku daray “Halkaas uma tegin in aan jokolaato iyo nacnac u qaybiyo carruurta, waxaan halkaas u tagey in aan geeyo Haraadiga Sunta halista ah iyo Sunta nooca loo yaqaan Radioactive….”
Hordhac: Cali Mahdi Maxamed oo ka mid ahaa madaxweynayaashii soo maray magaalada Muqdisho kaddib burburkii Soomaaliya ee 1991, ayaa warbaahinta iyo shacabka Soomaaliyeed waxa uu u diidey in uu wax uga sheego waxa uu ka ogyahay sunta lagu duugey Soomaaliya xilligii uu madaxweynaha ka ahaa Muqdisho. Haddaba waxaa hadda soo shaac baxay qoraal rasmi ah (WAREEGTO / digreeto) uu Cali Mahdi ku saxiixan yahay, taas oo uu ku ogolaaday in Haraadiga Sunta Halista ah lagu aaso Soomaaliya… Sida la ogyahayna Sunta lagu duugey Soomaaliya intii u dhaxaaysay 1992 ilaa 1998 waxay sababtay dhibaatooyin caafimaad darro oo soo wajahay mujtamaca Soomaaliyeed iyo xoolahoodaba…. Haddaba warqadda uu sida muuqata ugu saxiixan yahay Cali Mahdi Maxamed waxaa soo bandhigay barnaamij laga soo daayey Telefishanka Aljazeera oo loogu magac daray “Runta Sumaysan”. Barnaamijkaas oo ay SomaliTalk.com soo dhegeysatay tarjumadiisii waatan:
Gaarigii lagu diley Weriyaasha, Muqdisho 1994
Haddaba, Janaayo 17, 2009 ayaa Telefishanka Aljazeera, Qaybtiisa Afka Ingriiska, waxa uu baahiyey barnaamij qoto dheer oo uu kaga warbixinayey dilkii weriyaashaas oo daba joogey, baaritaanna ku samaaynayey mashruuca gargaarka Talyaaniga oo loo adeegsanayey soo gelinta hubka sharci darrada ah iyo Sunta halista ah oo lagu duugo Soomaaliya. Waxana TV-gu tilmaamay in ay jireen dad doonayey in aan warbixintaas la ogaan, waana la diley labadii weriye.
Alpi oo joogta Soomaaliya oo ku hagoogan Garba-saar…
Maxkamad ku taal dalka Talyaaniga ayaa nin Soomaali ah waxay ku xukuntay dilkii labadaas weriye, laakiin taasi kuma dhammaan sheekadii, sababtoo ah dhowaan ayaa Qareen Guud waxa uu xeeriyey in dacwaddaasi ay ahaato mid baaritaankeedu sii socdo, ilaa inta gacanta lagu soo dhigayo dadkii ka dambeeyey bixinta amarka lagu diley weriyaasha (sida aad hoos ku arki doontid faahfaahinta Qareenka Guud).
Sawirka hoose (dhexda) waa Xaashi Cumar Xasan oo ah 38-jir Soomaaliyeed oo Maxkamad Talyaani ah ay ku ridey xukun xarig ah oo la xiriira dilkii weriyahii Talyaaniga ahayd iyo sawir-qaadaheedii lagu diley Muqdisho Soomaaliya sannadkii 1994. Waana qofka keliya oo ilaa hadda lagu ridey xukunka dembigaas iyadoo ay jirtey in gaariga sidey dadka dilka geystey ay saarnaayeen dhawr rag ah. Xaashi waxa uu hadda ku jiraa xabsi Talyaani ah si u dhamaysto 26 sano oo xabsi ah. Waxayna Aljazeera sheegtay in ay isku dayday in waraysi ay la yeeshaan Xaashi, laakiin waxaa arrintaas u diidey saraakiisha xabsiga Talyaaniga, iyadoo la sheegay in uu yahay maxbuus si aad ah loo ilaaliyo. (Eeg warqaddii Xabsiga ee loo diray Aljazeera).
Xaashi Cumar Xasan (dhexda) oo la fadhiya qareenkiisa (bidix)
Qareenka Xaashi Cumar Xasan oo la waraystay ayaa sheegay “Fikirka in la dilo labada weriye waxaa asalkeedu ka yimid Talyaaniga ee kama iman Soomaaliya. Soomaaliya waxa keliya oo ay fuliyeen arrinta.”
Warqaddii Qareenka diidey in la xiro kiiska dacwadda dilka weriyaasha.
Maarso 1994 Soomaaliya waxay ku dhexjirtey dagaal ahli ah. Xukunkii Siyaad Barre waa dhacay. Laba jabhadood oo hubaysan ayaa u kala talinayey Muqdisho. Waxaana magaalada u kala qaybsanayd laba qaybood oo uu kala qaybinayey waxa loogu yeeri-jirey “Khadkii Cagaarnaa” oo ay ilaalin jireen ciidamo Qaramada Midoobey ah. Weriyaha Telefishanka dawladda Talyaaniga Ilaria Alpi iyo sawir-qaadaheedii Miran Hrovatin waxay ku dhex jireen safarkoodii Soomaaliya.
Alpi hooyadeed waxay sheegtay “in asal ahaantii (Alpi iyo Miran) ay Soomaaliya u tageen in ay war ka soo qoraan ka bixitaanka ciidamada Talyaaniga, waxaana jira sida aan ka ogaadey qoraalkeedii in sidoo kale ay doonayeen in ay dhamaystiraan baaritaan socdey” ayey tiri mar uu TV-ga Aljazeera waraysi la yeeshay labada waalid ee weriyaha la diley (Alpi), iyaga oo sheegay ilaa hadda in aysan garanayn sababtii loo diley gabadhoodii.
Maleysiyo Soomaaliyeed oo hubaysan oo dhex maraya dariiqyada Muqdisho… 1994
Taaladii Seyid Maxamed Cabdulle Xasan ee Muqdisho oo TV-gu muujiyey
Sida aan kor kusoo xusnay, Qareer Guud ee loo xilsaaray baaritaanka iyo dacwadda weriyaasha la diley ayaa bishii July (2008) waxa uu diidey in uu xiro dacwadda dilkii labada weriye, isagoo sheegay in kiiskaasi sii furnaan doono, isagoo arrintaas sabab uga dhigay in dadkii bixiyey amarka dilka aan weli gacanta lagu soo dhigin.
Waxana qormadii Qareenka Guud ka mid ahaa: “Arrintani (sidii dilku u dhacay) marka dib loo raaco waxa ugu macquulsan ee ka soo baxaya waa in uu ahaa Dil-Qorshaysan oo ahaa khaarijin si looga hor tago akhbaarta ay soo ururiyeen weriyaashu oo la xiriirta hubka iyo Qashinka Sunta Halista ah ee loo kala qaadayo inta u dhaxaysa Talyaaniga iyo Soomaaliya, arrintaas oo ay weriyaashu doonayeen in ay usoo bandhigaan indhaha bulshada.” – Intii aysan soo bandhigin (warbixintii ay daba joogeen) ayaana la diley si loo aamusiyo.
Warqadda qareenku ku diidey in la xiro dacwadda dilkii weriyaasha oo uu akhrinayo qareenka qoyska Alpi.
Telefishanku waxa uu muujiyey sawiro Hotel Saxafi ee Muqdisho iyo xaafado ku yaal magaalada. Kaddib waxa uu muujiyey buug ay ku qoran yihiin magacyada labada weriye – Tirada ama Lambarka buugga ay kaga qoran yihiin waa 202 iyo 203, sida ka muuqata sawirka hoose, waxaana buugga ku qoran in ay halkaas magacooda ku qoreen 12/3/1994.
Diiwaanka ay ku qoran yihiin weriyaasha la diley.. 202 Ilaria Alpi iyo 203 Miran Hrovatin
“Waxaan xasuustaa in markii saacaddu ahayd 12:30 xilliga Talyaaniga, in ay isoo wacday (Alpi) oo ii sheegtay in ay gaartey Muqdisho. Markaas waxaan dareemay nafis/naruuro waayo waxay ugu yaraan la joogtaa weriyaal kale. Umana aysan muuqan mid walwalsan.,” ayey tiri Alpi hooyadeed. Laba saacadood kaddib ayaa telefoonkii markale soo dhacay. “Markay ahayd 2:30 xilliga Talyaaniga ayaan telefoon waxaan ka helay Telefishan oo ii sheegay inay dhimatay (gabadhaydii),” ayey tiri hooyadeed.
Alpi hooyadeed iyo aabaheed oo jooga Talyaaniga oo Aljazeera waraysaneyso 2009
Markii ay waalidkeed wacday waxay Alpi iyo sawir-qaadaheedii ay ka tageen Hotel Saxafi iyagoo la socdey waardiyahoodii Maxamed Nuur Aden iyo Dareewalkoodii Cali Maxamed Cabdi, waxayna ka gudbeen Khadkii Cagaarnaa iyagoo a gudbey dhanka Waqooyi ee Magaalada Muqdisho ilaa ay gaareen Amaana Hotel.
Markii ay ka soo laabteen oo soo dhaqaaqeen waxaa soo daba galay gaari ah nooca Pick-up oo ay saaran yihiin 7 rag ah. Maxamed Nuur Aden (Waardiyaha) oo xilligaas (markii dilku dhacay kaddib) warbaahinta la hadlayey ayaa yiri: “Qorigii ayaa iga istaagey (ama xabbad ku mergadey), fursaddaas xabbadu iga istaagtey ayey ka faa’iidaysteen, qorigu markii xabbadu isku xirtay ayey iyagu markaas xabbado bilaabeen, baabuur dhicid ayeyna u socdeen, dareewalka ayey rabeen in ay dilaan, markaas ayey dileen gaalada,” ayuu yiri.
Dareewalkii (midig) iyo waardiyihii (sawirka dhow) oo dhiig wajiga kaga yaal..
Waxaa siyaabo kala duwan loo sheegay sababta ay Alpi u aadey Waqooyiga Magaalada Muqdisho. Qareenka Qayska Alpi oo magaciisu yahay Domenico D’amati ayaa rumaysan in dabin loo dhigay oo si xeeladaysan loogu yeeray in ay tagto (Woqooyiga Magaalada).
Isagoo arrintaas ka hadlayey D’amati waxa uu yiri: “Waxaan ognahay in Booliska Soomaaliya ay sameeyeen baaritaan oo ay ku muujiyeen in Ilaria Alpi telefoon loo soo diray si dabin ahaana loogu yeeray oo markaas la diley.”
Telefishanku waxa uu sheegay arrinta sida xaqiiqada ah loo hubo waa in wax yar kaddib markii Ilaria Alpi iyo Miran Hrovatin (ay tageen Waqooyiga Muqdisho) labada la diley, waxaana mid kasta hal xabbad lagaga dhuftay dhanka dambe ee madaxa (jeegada), islamarkaasna waardiyahii iyo dareewalkiina waxaa looga tegey nolol.
Qareenka qoyska Alpi waxa uu yiri “Waxaa la sheegay in kuwii dilka geystey ay weerarka soo qaadeen kaddib markii waardiyihii Alpi uu xabbad ku ridey, laakiin waxaa dhacday in kuwa weerarka soo qaaday aysan wax xabbad ah ku ridin waardiyaha taas oo ah arrin la fili karey in ay xabadeeyaan (qofkii xabbada kusoo riday), laakiin waxay xabbada ka rideen gudaha gaariga iyagoo dilay Alpi iyo sawir-qaadaha.”
Waxa kale oo TV-gu sheegay in saacadihii ku xigey dhimashadii Alpi iyo sawir-qaadaha in meel ay ka bexeen la waayey qaar kamid ah buugaagtii ay wax ku qoran jirtey Alpi. Waxa kale oo la waayey sawiradii meydadka iyo filimo qaar kamid ah kuwii ay duubeen intii ay Soomaaliya joogeen.
Dhawr qof oo xiriir lalahaa kiiska ayaa ku dhintan siyaabo aan la aqoon. Hal qof oo joob jooge ahaa, oo fure u ahaa kiiska, waa la diley.
Dareewalkii Alpi oo magaciisu yahay Cali Maxamed Cabdi, oo ku markhaanti furay Xaashi Cumar Xasan markii la soo taagey maxkamadda Talyaaniga, waxaa (dareewalkii) la diley dhawr maalmood kaddib markii uu ka soo laabtay Talyaaniga oo ku soo noqday Soomaaliya.
Bidix: Cali Maxamed Cabdi, dareewalkii oo la taagan waardiyihii
Dhimashadii labada weriye kaddib, waxaa la helay xog iyo akhbaar muujineysa in ay weriyaashu ku guda jireen baaritaanno.
“1400 billion liire: Xaggee ku dambeysey Lacagtan Xad Dhaafka ah” ayaa ka mid ahaa qoraal ku qornaa buug ay wadatey Alpi, buugaas oo ka badbaadey qoraaladii la waayey kaddib markii la diley weriyaasha – (eeg sawirka hoose oo ah qoraalkii Alpi oo ku qoran Talyaani).
“1400 miliardi di lire: dove è finita questa impressionante mole di denaro?“
“1400 billion liire: Xaggee ku dambeysey Lacagtan Xad Dhaafka ah”
Qormadii Alpi oo muujibeysa in ay daba joogtey meesha martay lacag dhan 1400 Billion oo liire.
Qoraalkaasi waxa uu muujinayaa in weriyuhu ay daba joogtey sida khaldan oo loo adeegsadey mashruuca deeqda Talyaaniga ee horumarinta Soomaaliya, ayuu yiri TV-ga.
Waraysigii ugu dambeeyey ee Alpi ay qaado waxa uu ahaa waraysi ay Boosaaso kula yeelatay Muuse Boqor (King Kong). Waraysigaas oo ku saabsanaa Afduub ay Burcad Badeed Soomaaliyeed u geysteen Markab Kalluumaysi oo ay ku deeqday dawladda Talyaanigu.
Alpi oo waraysaneysay Muusa Boqor.. Boosaaso, 1994
Alpi waxay Muusa Boqor weydiisey su’aal la xiriirta maraakiibtii Qaranka oo uu qaatay ninka lagu magacaabo Muunye, iyadoo tiri “Waxaa jira hadallo ku saabsan fadeexad, oo ku saabsan mulkiile Soomaali ah oo haysta Baasaboor Talyaani ah, oo lagu magacaabo Munye, kaas oo qaatay maraakiib uu lahaa qaranku, waxana uu maraakiibtaas u adeegsadey si gaar ah sidii in uu isagu leeyahay.”
Muuse Boqor isagoo qoslaaya waxa uu ku jawaabey “Isaga, isaga oo keliya”.
Waxay markaas Alpi weydiisey, haddaba “hadda xaggee jiraan markabkaasi, ma la arki karaa?” Waxana uu ugu jawaabey “Maxaad ula jeedaa ma la arki karaa?, sababtee ayaad u dooneysaa in aad aragtid?” Waxana uu intaas Mussa Boqor raaciyey “Ma waxaad tahay ‘SISDE‘? (oo ah xarfo loo soo gaabiyo Sirdoonka Talyaaniga). Waxana uuna uu intaas raaciye “Sababtee ayaad u dooneysaa in aad u aragtid (maraakiibta). Qaado akhbaarta intaasna ku joog.” Waxay markaas Alpi tiri “Haddii aanan arkin ma rumaysan karo.” Waxa uu markaas Muusa Boqor yiri “Haddii aadan arkin ma rumaysan kartid miyaa?” isagoo qoslaya, waxana uu intaas raaciyey “Haddaba adeegso dayax-gacmeed (satellite)”.
(Dhexda) Muusa Boqor oo uu waraysi ka qaadayo weriye Maurizio Torrealta (bidix)…
Maurizio Torrealta oo ah weriye Talyaani ah, oo la shaqayn jirey Alpi, oo faallo ka bixinayey waraysigii ay Alpi la yeelatay Muusa Boqor ayaa yiri: “Waa in waraysigaas markasta la tuso ardayda dhiganeysa maadooyinka saxaafadda, waayo waa wixii ugu dambeeyey oo laga hayo hawshii ay wadey Alpi, wax kasta waxay isugu soo biyo shubanayaan waraysigaas.”
Maurizio Torrealta oo sii ambaqaadayey hawshii ay wadey Alpi ayaa waraysi la yeeshay Muusa Boqor. Weriyahaas ayaa yiri “Waxaan waraysi la yeesha qofkii ay waraysiga la yeelatay Alpi, magaciisu waa Muusa Boqor, waxana uu xaqiijiyey in Maraakiibtaas lagu aqoon jirey in ay si qarsoodi ah u soo qaadaan hub. Maraakiibtaas waxaa Soomaalida ugu deeqay Talyaaniga, mashruuca horumarinta.”
Weriyahaasi waxa uu dabagal ku sameeyey maraakiibta shirkadda lagu magacaabo SHIFCO, markaaiibtaas oo ah kuwii Talyaanigu ugu deeqay Soomaaliya, waxaana maraakiibtaas loo adeegsadey qaadista hub sharci darro ah sida ay muujiyeen qoraallo iyo saxiixyo ay soo bandhigeen baaritaankii Qaraamada Midoobey ee Maarso 25, 2003. Warbixintu waxay sheegtay in Janaayo 1992 in Maraakiibta SHIFCO loo adeegsadey qaadista hub sharci darro ah (oo la geeyey Soomaaliya iyo meelo kale). Waxaana warbixintu muujisay hub laga soo iibiyey dalka Poland iyadoo loo muujiyey in hubka loo wadey Latvia, kaddibna loo leexiyey Yemen, ugu dambayntiina la geeyey Soomaaliya.
Waraaqihii ay soo bandhigtay Qaramada Midoobey 2003 in Soomaaliya hub la geeyo
Maraakiibtaasi inay hub qaadi jirtey waxaa sii xaqiijiyey nin Soomaali ah oo waraysi lala yeeshay kana mid ahaa shaqaalihii markabka “21-ka Octobar” (ee SHIFCO), ninkaas oo magaciisa la yiraahdo Maxamed Samatar oo lagu naanayso “FORCHETTO“, waxana uu yiri: “Waxaan u malaynayaa in aan wadney hub, sababtoo ah konteeranka waxaa ku qornaa in uu halis yahay oo wax qarxa yahay oo aan la taaban karin.” (Markabka “21 Octobar” waxa uu July 2007 kusoo caariyey xeebta Garacad, sida aad ku arki doontid waraysiga ku Lifaaqan dhanka hoose).
Maxamed Samatar “Forchetto” oo shaqaale ka ahaa markabka “21 October”
Franco Oliva oo ah lataliye xagga dhaqaalaha ayaa dawladda Talyaanigu waxay u dirtay Muqdisho kaddib markii dagaalka ahligu ka qarxay Soomaaliya si uu korka uga ilaaliyo qaabka ay ku baxaan mucaawinada ay dawladda Talyaanigu siiso Soomaaliya. Ninkaasi markii uu Soomaaliya tegey waxa uu diyaariyey warbixin uu ku dalbanayo in la joojiyo Mucaawinada ay Dawladda Talyaanigu siiso Soomaaliya, (sida khaldan oo loo adeegsadey awgeed) iyo isagoo shaki weyn ka muujiyey qaabka ay u hawl galaan mashaariicdaasi oo uu uga shakiyey in ay Qashinka Sunta Halista ah ku duugaan Soomaaliya.
Arrintaasi uu ka hadlay Oliva waxay ka xanaajisay dad (aan doonayn in laga hadlo sida xaaladdu ahayd), waxayna dhaxalsiisay in xabbad laga qabadsiiyo lugta midig. Markaas ayuu naftiisa isagoo la cararaya waxa uu ku laabtay Talyaaniga. Arrintaasi waxay dhacday shan (5) bilood ka hor dilkii Alpi iyo Miran.
Franco Oliva oo waraysi siiyey TV-ga Aljazeera ayaa yiri “Sanadihii 1980-naadkii waxaa cajaa’ib ahayd in ay aad u fududay in ganacsade Talyaani ah uu Goobo ka furto Soomaaliya, gaar ahaan aagga Koonfur kaga aaddan Muqdisho. Xitaa xilligaas in badan oo Soomaali ah waxay sheegi jireen in goobahaas lagu aaso Qashinka iyo Haraadiga Sunta Halista ah ee ka imaneysey Talyaaniga.”
Franco Oliva, oo ahaa lataliye Talyaanigu usoo diray Soomaaliya…
Warbixinta Telefishanku waxay sheegtay in Mashaariicda Horumarinta ee ay maalgeliso Dawladda Talyaanigu in lagu eedeeyey in lagu hoos qarinayey sidii fuustooyin ay ku jiran Sunta Halista ah loogu aasi lahaa Xeebta iyo berriga/dhulka Soomaaliya.
Waxaa warbixintu tibaaxday in habka Sunta Halista ah loogu duugo Soomaaliya ay ka mid ahayd in dhulka hoostiisa la geliyo marka la qodayo ceelasha, dhismayaasha wadooyinka iyo goobaha beeraha. (Taas oo macneheedu yahay in: Meeshii ceelasha biyaha laga qodi lahaa in lagu duugo Sun Halis ah. Halkii waddo laga dhisi lahaa in lagu aaso Haraadiga Sunta. Meeshii beeraha lagu beeri lahaa khudaar in ciidda hoosteeda la geliyo Qashinta Sunta Haraadiga ah).
Franco Oliva waxa uu sheegay in ay jireen mashaariic shaki ku jiro, “gaar ahaan mashaariicda beeraha, kuwaas oo ciidda dhulka laga qodayo ay aad u badnayd marka loo barbardhigo ujeedada mashruuca.” Waxana uu muujiyey in la qoday godad lagu aasay sunta halista ah ee lasoo daabulay.
Hadalka Franco Oliva waxaa sii xaqiijiyey Baaritaan uu Sameeyey Baarlamaanka Dalka Talyaaniga, baaritaankaas oo la xiriiray Haraadiga Sunta Halista ah oo sida sharci darrada ah loogu duugo Dhulka Soomaalida.
Waxana uu Telefishanku muujiyey sawirro laga soo qaaday haamo sun ah oo yaalla ama laga soo sawiray xeebaha dalka Soomaaliya, iyo dad Soomaaliyeed oo ku lugaynaya dhul qurux badan oo aysan aqoon waxa lagu hoos duugey.
Soomaaliya: Soomaali ku dul soconeysa dhul aysan ogeyn waxa lagu duugey…
Sawiro muujinaya haamo sun ah oo yaalla dhulka Soomaalida
Ee warbixinta waxaan ku eegeynaa sida muuqata ee Sunta Halista ah loogu duugey Soomaaliya iyo Nin ka mid ah dadka Sunta keeni jirey Soomaaliya si bareer ah u sharxaya sida ay sunt au soo gelin jireen dhulka Soomaalida.
FG: Qaybta u dambaysa qormadan waxaad ku arki doontaa Lifaaq ku saabsan Markabkii “21 Octobar” oo ku Caariyey Xeebta Garacad.
Previous: Taariiq nololeedka Fanaanka Abdi Holland
Next: Ali Mahdi Muhammad Essay
Burcad badeed maraakiib qafaashay